Wakiilka UN ee Suuriya oo rajo muujiyay - BBC News Somali
Wakiilka UN ee Suuriya oo rajo muujiyay
Image caption Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Suuriya, Staffan de Mistura
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada midoobey u qaabilsan Suuriya, Staffan de Mistura, ayaa BBC-da u sheegay inuu rumaysan yahay inay jirto xaalad iyo fursad cusub oo lagu xallin karo qalalaasaha Suuriya.
Wareysi gaar ah oo uu siiyay BBC, kaddib kullan uu la yeeshay madaxweynaha Suuriya Bashar al Assad, Mistura ayaa sheegay in dowladda ay si wanaagsan u eegeyso qorshihiisa cusub ee lagu deminayo colaadda magaalada kala qeybsan ee Xalab, halkaas oo ciidammada dowladdu ay isku gedaameen goobaha ugu dambeya ee mucaaradku haystaan.
Qorshaha cusub ee Qaramada Midoobey, waxa uu ku baaqayaa in dhinacyada oo dhan ay joojiyaan qalalaasaha sii huraya taas oo lagu dhammeeyo xabad joojin gudaha ah si gargaar loo gaarsiiyo, rajada dhulkaasna la soo celiyo.
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ayaa aaminsan halista kooxda Khilaafada Islaamka ay dhalisay fursad lagu xallin karo dhibaatada Suuriya.
Madaxweyne Asad ayaa hadda soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegayo in qorshahaasi uu yahay mid qiimo leh.
Mistura ayaa tilmaamay in hadda arrintan uu u gudbinayo mucaaradka.